Golaha Wasiirrada Ethiopia - BBC News Somali
Golaha Wasiirrada Ethiopia
7 Oktoobar 2010
Ra'iisul wasaaraha Ethiopia, Meles Zenawi, ee dhowaan dib loogu soo doortay xilka, ayaa soo magacaabay golihiisa wasiirada cusub.
Waxaa ku jira laba wasiir oo ka soo jeeda gobolka Soomaalida ee Ethiopia.
Gobolada dalka Ethiopia dhamaan ayay ka soo jeedaana golaha wasiirada cusub ee Ethiopia waxaana ay kala yihiin:
Wasiirka arrimaha dibedda, ahna Raiisul Wasaare ku xigeen: Haila Mariam Desalgen, Waxa uu ka soo jeedaa koonfurta Ethiopia. Dowladda ayuu u soo shaqeeyay, waxa uu macalin iyo madaxba ka soo noqday jaamacadda sanado badan, Waxa uu ka soo shaqeeyay gobolka koonfurta Ethiopia, isagoo ka ahaa ku xigeenka madaxa maamulka. Ilaa 1998 waxa uu la taliye u ahaa Raiisul Wasaaraha. 2000 kadib waxa uu xubin baarlamaanka, waxa uu guddoomiyaa xisbiga Southern Ethiopian democratic party, waana guddoomiye ku xigeenka EPRDF.
Wasiirka Difaaca: Sirag Fegas, waxa uu ka soo jeedaa Selete. Waxa uu ka soo shaqeeyay dowladda isagoo soo qabtay xilal madax laamo kala duwan, ilaa 1998 waxa uu dowladda federalka ka ahaa wasiir, ilaa 2001 waxa uu ahaa wasiirka difaaca. Waa xubin ka tirsan baarlamaanka, waxaana uu xubin ka yahay EPRDF.
Wasiirka Arrimaha Federaalka, Dr. Shiferaw Teklemariam, Waxa uu ka soo jeedaa Hadia , ilaa 1998 waxa uu ahaa ku xigeenka wasiirka caafimaadka, 2001 waxa uu noqday wasiir dowladda federalka, hadda waxa uu u shaqeynayay dowladda koonfurta Ethiopia, waana xubin ka tirsan EPRDF.
Wasiirka cadaaladda, Berhani Hailu waxa uu ka soo jeedaa gobolka Amxaarada, waxa uu door kala duwan ka soo cayaaray gobolka Amhara, waxa uu masuul ka ahaa caafimaadka, waxa uu sidoo kale soo noqday madaxa radio iyo telefishinka, . 1998 waxa uu noqday wasiirka wasaaradda warfaafinta. Waxa uu xubin ka yahay Xisbiga Amhara iyo EPRDF.
Wasiirka adeegga madaniga ah, Junedin Sado, waa Oromo, waxa uu soo noqday madaxweyne , 1998 waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo isgaarsiinta. Ilaa sanadkii 2001 waxa uu ahaa wasiirka sayniska iyo tiknoolajiyadda. Waxa uu xubin ka yahay Oromo iyo EPRDF.
Wasiirka Maaliyadda, Sufyan Ahmed: waxa uu ka soo jeedaa gobolka Oromo, waxa uu ka soo shaqeeyay dowladda, waxa uu macalin ka ahaa jaamacadda Addis Ababa sanado badan, Waxa uu soo noqxday wasiirka maaliyadda kadibna wasiirka qorsheynta, waxa sidoo kale uu madax ka noqday laamo kala duwan, Waxa uu xubin ka yahay Xisbiga Oromo Democratic Party iyo EPRDF.
Wasiirka beeraha, Trefera Derbew: waxa uu ka yimid gobolka Amxaarada, waxa uu ka soo shaqeeyay wasaarado kala duwan,, waxa sidoo kale uu ka soo shaqeeyay gobolka Amhara, oo uu ka noqday madaxa qeybta beeraha, 1998 waxa uu noqday madaxa beeraha iyo horumatinra ee Zone-ka Amharada.
Wasiirka Warshadaha, Mekonen Manyazewal: waxa uu ka soo jeedaa gobolka Amxaarada, ilaa 1983 waxa uu dhaqaale yahan uga soo shaqeeyay laamo kala duwan, 1984, waxa uu ahaa ku xigeenka wasiirka maaliyadda, dhaqaalaha, iyo horumarinta, waxa uu ka soo shaqeeyay horumarinta iyo qorsheynta iyo maalgelinta, waa xubin ka tirsan EPRDF.
Wasiirka Ganacsiga, Abd-al-Rahman Shaykh Muhammed: waa Soomaali, waxa uu ka soo shaqeeyay gobolka Soomaalida, oo uu madax u ahaa guddiga shaqaalaha dowladda, waxa uu taageeray hawlo kala duwan oo dhinaca waxbarashada ah, waxa uu madax ka soo noqday gargaarka, waxa uu markii ugu danbeysay ahaa sarkaal waxbarshada gobolka Soomaalida, waxa uu xubin ka yahay xisbiga Somali democratic Party.
Wasiirka Sayniska iyo Tiknoolajiyada: Desie Dalkie, waxa uu ka soo jeedaa Sidma. Waxa uu ka soo shaqeeyay laamo kala duwan oo dowladda. Waxa uu ka soo shaqeeyay gobolka Koonfurta Ethiopia, oo uu ka soo noqday madaxa laamaha waxbarashada iyo horumarinta.. Waa xubin xisbiga southern Ethiopian people iyo EPRDF. Sidoo kale waa xubin ka tirsan baarlamaanka.
Wasiirka gaadiidka, Dirib Kuma, waa Oromo. Waxa uu aks oo shaqeeyay gobolka Oromo oo xilal kala duwan uu ka soo qabtay. 1998 waxa uu soo noqday sarkaal dhinaca beeraha iyo horumarinta . 2002 waxa uu noqday wasiirka isgaarsiinta iyo gaadiidka.
Wasiirka Warfaafinta iyo tiknoolajiyadda: Debretsion Gebremiskael, waa Tigray. Waxa uu u soo dagaallamay TPLF. Waxa uu soo noqday madax iyo wasiir gobolka Tigray. Waxa uu ahaa agaasimaha warfaafinta, isgaarsiinta iyo hey’adda horumarinta. Waa xubin ka tirsan EPRDF.
Wasiirka Dhismaha iyo horumarinta magaalooyinka: Ato Mekuria Haile waxa uu ka soo jeedaa gobolka Gurage. Waxa uu u soo shaqeeyay dowladda deegaanka, laamaha ganacsiga, warshadaha iyo horumarinta magaalada. 2001 waxa uu noqday madaxa dowladda hoose ee Addis Ababa.
Wasiirka Biyaha iyo Tamarta, Alemayehu Tegenu, waa Oromo.
Wasiirka Kaawooyinka: Senkenesh Ejigu, waxa ay ka timid gobolka Oromo.
Wasiirka Waxbarashada Ato Demeku Mekonnen waxa uu ka soo jeedaa Amhara zone.
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Abdulfatah Abdulahi Hasan, waa Soomaali. Waxa uu Agaasime ka ahaa machadka maamulka. Wuxuu sidoo kale madax ka soo noqday qeybta waxbarashada. Hadda waxa uu ahaa sarkaalka horumarinta. Waxa uu guddoomiye ka ahaa SHDP.
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska, Ato Amin Abdulkader, Waxa uu ka yimid gobolka Afar.
Wasiirka Haweenka, Carruurta iyo Arrimaha Dhallinyarada, Zenawbu Tadese, waxa ay ka soo jeedaa Amhara zone.
Maqal Dowladda Soomaaliya oo dhawaan fileyso inay soo daabacdo lacago cusub
Dowladda Soomaaliya oo dhawaan fileyso inay soo daabacdo lacago cusub
Maqal Reer guuraaga deegaanka Nuunow ee duleedka magaalada Garissa oo ka cabanaya biyo la'aan
Reer guuraaga deegaanka Nuunow ee duleedka magaalada Garissa oo ka cabanaya biyo la'aan